समस्या​—⁠आफूले माया गरेको व्यक्तिको मृत्यु हुँदा
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी एस्टोनियन कन्नडा किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्रोएसियन क्वेचा (आयाकुचो) क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टिग्रिन्या डच डेनिश तामिल ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
आफूले माया गरेको व्यक्तिको मृत्यु हुँदा
ब्राजिलका रोनाल्डो एउटा कार दुर्घटनामा परे। त्यस दुर्घटनामा तिनको बुबा र आमासहित परिवारका पाँच जना सदस्यहरूको ज्यान गयो। रोनाल्डो भन्छन्‌: “दुर्घटनामा उहाँहरूको मृत्यु भएको खबर मैले अस्पतालमा दुई महिना बिताइसकेपछि मात्र पाएँ।
“उहाँहरूको मृत्यु भएको कुरा सुरुमा त मैले पत्याउनै सकिनँ। एकैचोटि सबै जनाको मृत्यु कसरी हुन सक्छ र? यो कुरा साँचो हो भनेर बुझेपछि मलाई ठूलो झट्‌का लाग्यो। यस्तो पीडा त मैले पहिला कहिल्यै महसुस गरेको थिइनँ। त्यसपछि मलाई उहाँहरूविना बाँच्नुको कुनै अर्थ नै छैन जस्तो लाग्न थाल्यो। महिनौंसम्म म हरेक दिन रोएँ! त्यस दिन मैले अरूलाई कार चलाउन नदिएको भए उहाँहरूको मृत्यु हुने थिएन, त्यसैले यो सब हुनुमा मेरै दोष छ जस्तो लाग्थ्यो।
“यो घटना भएको १६ वर्ष बितिसक्यो र म अहिले आफ्नो दैनिक कामकुरा सम्हाल्न सक्ने भइसकेको छु। तर उहाँहरूको मृत्युले गर्दा म अझै पनि एक्लो महसुस गर्छु।”
समस्याको सामना कसरी गर्न सक्नुहुन्छ:
आफ्नो मनमा भएको दुःख नलुकाउनुहोस्। बाइबल यसो भन्छ: “रूने एउटा समय छ।” (उपदेशक ३:१, ४) रोनाल्डो भन्छन्‌: “रुन मन लागेको बेला म आफूलाई रोक्दिनँ। यसै पनि आँसु रोक्न खोज्नु व्यर्थ हो। रोएपछि म हल्का महसुस गर्छु।” तर सबै जनाको दुःख व्यक्त गर्ने तरिका एउटै हुन्छ भन्ने छैन। त्यसैले तपाईंलाई रुन मन लाग्दैन भन्दैमा तपाईं आफ्नो भावनालाई दबाउनुहुन्छ भन्ने त होइन। अनि आँसु झार्नैपर्छ भन्ने पनि छैन।
अरूबाट अलग रहने कोसिस नगर्नुहोस्। (हितोपदेश १८:१) रोनाल्डो भन्छन्‌: “एक्लै बस्न त मन लाग्छ। तर मैले आफूलाई अरूबाट अलग पारिनँ। मानिसहरू मकहाँ आउँदा मैले उहाँहरूलाई स्वागत गरें। मैले आफ्नी पत्नी र नजिकका साथीहरूलाई आफ्नो भावना पोखाएँ।”
कसैले तपाईंको चित्त दुखाउने कुरा भनेमा शान्त रहनुहोस्। कसै-कसैले भन्लान्‌, “जे हुन्छ, राम्रैका लागि हुन्छ नि।” रोनाल्डो भन्छन्‌: “मलाई सान्त्वना दिन भनी कसै-कसैले भनेका कुराले मेरो मन चसक्क बिझाएको थियो।” तर कसैले चित्त दुखाउने कुरा गरे पनि बाइबलको यो सल्लाह पालन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ: “मानिसहरूले भनेका सबै कुरामा ध्यान नदेऊ।”—उपदेशक ७:२१.
मरेकाहरू कस्तो अवस्थामा छन्‌ भन्नेबारे सत्य कुरा सिक्नुहोस्। रोनाल्डो यसो भन्छन्‌: “बाइबलको उपदेशक ९:५ मा मरेकाहरूले सास्ती पाइरहेका छैनन्‌ भनेर बताइएको छ। यो कुराले मलाई मनोशान्ति दिन्छ। बाइबलमा मरेकाहरूले पुनर्जीवन पाउनेछन्‌ अर्थात्‌ तिनीहरू फेरि जीवित हुनेछन्‌ भनेर पनि बताइएको छ। त्यसैले मैले गुमाएका परिवारका सदस्यहरू कतै यात्रामा गएका मानिसहरू जस्तै हुन्‌, तिनीहरू एकदिन फर्कनेछन्‌ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।”—प्रेषित २४:१५.
के तपाईंलाई थाह थियो? परमेश्वरले ‘मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ’ अर्थात्‌ हटाउनुहुनेछ भनेर बाइबलमा प्रतिज्ञा गरिएको छ। *—यशैया २५:८. (g14-E 07)
यी लेखहरूमा एक्कासि समस्याहरू आउँदा तपाईं कसरी त्यसको सामना गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिएको छ। मानिसहरूले किन दुःखकष्ट भोग्छन्‌ भन्ने विषयमा बाइबलले बताएको कुरा बुझ्न “असल मानिसहरूले दुःख पाउँछन्‌, किन?” शीर्षक भएको हाम्रो सहप्रकाशन प्रहरीधरहरा पत्रिकाको जुलाई १, २०१४ अङ्‌कका लेखहरू पढ्‌नुहोस्।
^ अनु. 11 थप जानकारीको लागि बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? भन्ने किताबको अध्याय ७ हेर्नुहोस्।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने आफूले माया गरेको व्यक्तिको मृत्यु हुँदा
एक्कासि समस्या आउँदा​—⁠आफूले माया गरेको व्यक्तिको मृत्यु हुँदा